Yintoni i-DMAA powder esetshenziselwa ukwakha umzimba? | AASraw
/Blog/DMAA/Yintoni i-DMAA powder esetshenziselwa ukwakha umzimba?
ezaposwa ngomhla 02 / 11 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo DMAA.
Yintoni i-DMAA powder?
DMAA, igama leekhemikhali: I-Methylhexanamine okanye i-1,3-dimethylamylamine yile i-molecule esetyenziswe ngumzimba ukwandisa amandla amanqanaba nokukhuthaza Ukulahlekelwa ngamatyeIDMAA yinkomfa yendalo eyenziwa ngokuqhelekileyo kwi-geraniums. Ngenxa yalesi sizathu ukuxhasa abavelisi bavame ukuyibiza ngeoli yegeranium okanye i-geranium extract, kodwa iyaziwa ngamanye amagama aquka i-methylhaxaneamine kunye ne-geranamine.
Unesiphumo esinamandla esinokubangela ukuba kubaluleke kakhulu kubabuciko bomzimba kunye nokukwazi ukusebenza njenge-thermogenic burner eyenza ukuba ifunwe ngokufanayo ngabantu abafuna isongezelelo sokulahlekelwa kwesisindo esisebenzayo.
Nangona i-DMAA ecetyiswa ngokwemvelo ibonwa ngokuba yindlela ekhethiweyo, kunokwenzeka kwakhona ukuba kwenziwe isithako phantsi kweemeko zelabhoratri. Kuye kwacingwa ukuba i-DMAA yokwenziwa ngoku ixhaphake ngakumbi kunefomu lezemvelo.
Iinkampani ezongezelelweyo zenkxaso (ngoku engasasebenzi) zongeze i-DMAA kwimveliso, ithathwa ngokuba yenziwe ngokwemvelo kwi-geraniums. Oku kuye kwafundwa luluntu lulwazi kwaye luboniswa buxoki. Akukho ndlela yamanqanaba e-DMAA kwimveliso ayenokuvela kwimithombo yendalo.
Yintoni ukucocwa okuphezulu kwe-DMAA powder?
I-DMAA Powder, luhlobo oluthile lwe-crystal powder. Njengoko i-DMAA i-DMAA, i-DMAA ipow powder enye yokuthengiswa okutshisayo phakathi kweemveliso, kungekhona nje ngenxa yeendleko ze-DMAA, kodwa ne-acacuse ukuhlambuluka ye-DMAA eluhlaza, ewe, ukuba ndiyithenge I-DMAA powder ngobuninzi, okanye ukusebenzisa i-lab, ndakhetha ukukhetha ukuthenga i-DMAA eluhlaza kwi-intanethi, ukhethe umthengisi we-DMAA othembekileyo kwaye ugcine ulwalamano oluzinzileyo. Iinkcukacha zeDMAA inkcazo ye powder in AAS njenge:
I-Formula ye-Molecular: C7H17N.HCl
I-Melt Point: 199-199.5 ° C
Njengezinto ezinobungozi beDMAA, i-DMAA yinkqubo enamandla kakhulu ye-nervous system (CNS) evuselela amanqanaba ombane afana necaffeine, kodwa isebenza ngendlela ehlukile. Nangona iimeko ezichanekileyo apho i-DMAA yokwandisa amandla engekho i-100% ethile, abaninzi abaphandi bayavuma ukuba i-DMAA ivuselela i-noradrenaline (norepinephrine) ukukhululwa kwingqondo. Ngaphandle kwe-adrenaline (epinephrine), i-noradrenaline yenye yeyona nto 'yokulwa okanye yokuhamba' komzimba i-neurotransmitters ekhutshwe ngexesha loxinzelelo (oko kukuthi ixoshwe yijaguar!). I-FYI, i-noradrenaline "ingcali" ye-catecholamine, kodwa isebenza njengombini kunye ne-neurotransmitter emzimbeni oveliswa zizilonda ze-adrenal eziphezulu kweentso zakho. Njengoko izigulane ze-adrenal zifakela ngaphezulu i-noradrenaline kwigazi, isantya senhliziyo, uxinzelelo lwegazi, kunye nokuhamba kwegazi kuya kwiisisipha zomzimba ezixhatshazwayo. Ukukhululwa kwe-noradrenaline kukhuthaza ukuba i-glucose ikhutshwe kwiivenkile ze-glycogen emzimbeni wakho, ezingasetyenziselwa ukulawula amandla akho ngexesha lokuzivocavoca. Ngokweempembelelo ezibonakalayo, i-noradrenaline iphucula kakhulu ingqwalasela, ingqwalasela, ukukhuthazwa, ukuphaphama, amandla, kunye nexesha lokuphendula. Ngamanye amazwi, Le ngenye yezizathu eziphambili abantu bathanda i-DMAA ekusebenzeni kwangaphambili kunye nokushisa kwamafutha - uzive ukhulu kwaye unamandla angapheli ukufumana umsebenzi! Ngokuphathelele ixesha le miphumo, i-DMAA ihlala ixesha elide kwaye ihamba ngokukhawuleza kunekhoffeine, esinye isizathu sokuba abantu bathande ukuyisebenzisa.
I-DMAA iinzuzo ze powder ze-Fat Burning
Nangona i-DMAA iyaziwa ukuba isebenze njengotshisa ngamafutha ayo anganyuka kakhulu xa ihlanganiswe nezinye izithako, ezifana ne-caffeine kunye nezinye iziphumo zibonisa amandla ahlangeneyo we-DMAA kunye ne-caffeine inokunyusa izinga lokunciphisa umzimba nge-35% kunye nokuphucula amafutha ubuchule obuvuthayo ngaphezu kwe-169% (xa kuthelekiswa neqela le-placebo).
Ukutshisa amafutha kunokubangela ngeendlela ezininzi. Enyanisweni, umzimba ungayifaka ngaphandle kwemfuno yokuncedisa kwaye yenza njalo nayiphi na ukushiyeka kweekhalori. Yiyo, ke, isizathu sokuba ukutya okulawulwa kwekhalori kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni ukutya.
Izixhobo zokutshisa amafutha zibonelela ngeendlela zokubangela ukushisa kwamafutha ngokukhawuleza kunokuqhelekileyo okanye kwimeko apho ukutshisa kwamafutha kungeke kuqaliswe. Kwimeko ye-DMAA, isiphumo siphumelele ngokuvuselela inkqubo ye-nervous central ngendlela ekhupha impendulo yangaphakathi yekhenkethi eyenza ukuba ifuthe ifuthe.
Iimpazamo zePDAA zepoda Ukwakha umzimba
Njengazo nayiphi na ivuselelayo, i-DMAA inokuba luncedo xa ithathwa ngaphambi kweseshoni yokuqhuba umsebenzi ngenxa yokuba amandla angaphezulu anikezelayo angenza umsebenzisi afumane iqondo eliphezulu lokuqeqeshwa.Kodwa unokubonelela enye inzuzo enokubonakala ingenakucala.
Izakhiwo ezininzi zokwakha umzimba - Hayi (i-nitric oxide) ngakumbi-zenzelwe ukubonelela nge-vasodilation. Le yinkqubo ebangela ukwanda kwamanani emida yegazi evumela ukuba izihlunu zifumane i-oksijeni kunye nezondlo.
I-DMAA i-vasoconstrictor, ngoko yenza okuchaseneyo. Imithambo yegazi encinci inganciphisa inani lezondlo ezitholakalayo kwiimisipha, kodwa likhuthaza nokuxhamla umxube we-hypertrophy kunye nokunyaniseka okuphantsi kunye nabanye ababuciko bomzimba babika iziphumo ezilungileyo.
Kuphi ukuthenga i-puytyty DMAA powder?
Enyanisweni ndibelane ngeendlela ezininzi, kodwa kusekho umntu ongazi, ngoko ngoku ndibelwana kwakhona.
Okokuqala, zama ukukhangela umthengisi ophezulu we-20 DMAA powder, kwaye uzama ukwazi ezinye iinkcukacha, kodwa ngokubhekiselele ekuhambeni.
Ngaloo ndlela, i-AAS ifunyenwe nkampani, umniki-mpahla we-DMAA, kunye nomgangatho ophezulu kunye nenkonzo enhle.
I-AASraw ye-Biochemical Technology Co. yahlelwa kwakhona yi-Shanghai yase-Shanghai yaseBlookystem Engineering Laboratory e-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakanyisiwe kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroids i-powder eluhlaza , ukwakha umzimba, ukuqina, ukulahlekelwa ngamafutha, amahomoni esondo, ii-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, homebrew, ugl.Ngokwezinto endaziyo, Xa unquma ukuthenga i-DMAA powder kwi-AAS, izinto omele ukwenze yile:
Iimpembelelo zeClostebol i-Acetate powder: Kutheni abantu bathanda i-Tbol?	Ngaba ngokwenene i-Modafinil ekuphuculeni i-brainpowder isebenza kakuhle Emva kokuthatha?